ekhaya / Bible / YeVangeli kaYohane / ch 19 John
19:1 ngoko ke, ngoko uPilato wamthabatha uYesu bamsa eluvalelweni wamtyakatya.
19:2 Namajoni, kokulukwa isithsaba sameva, ebekwe phezu kwentloko yakhe. Kwaye ke babeka nengubo ebomvu ngeenxa zonke kuye.
19:3 Baye ukusondela kuye esithi, "Mawudunyiswe, ukumkani wamaYuda!"Yaye wambetha ngokuphindaphindiweyo.
19:4 Wabuya ngoko waphuma phandle kwakhona, Wathi ke yena kubo: "Khangela, Ndimzisa phandle kuni, khon 'ukuze uqonde ukuba mna andifumani tyala kuye. "
19:5 (Ke waphuma uYesu waya, enxibe isithsaba sameva nengubo ebomvu.) Wathi ke yena kubo, "Nanko umntu."
19:6 ngoko ke, xa ababingeleli abakhulu kunye abalindi bambona, Batsho bakhala, bathi: "Mbethelele! Bethela!"Wathi ke uPilato kubo: "Mthabatheni nina ngaye emnqamlezweni. Kuba mna andifumani tyala kuye. "
19:7 Aphendula ke ngoko amaYuda kuye, "Thina umthetho, kwaye ngokomthetho, ke ufanele ukufa, ngokuba wenze ezenze uNyana kaThixo. "
19:8 ngoko ke, xa uPilato, akuliva elo lizwi, yena woyika ngakumbi.
19:9 Ke kaloku, wangena endlwini yerhuluneli. Wathi kuYesu. "Uvelaphi?"Kodwa uYesu wamnika akukho mpendulo.
19:10 ngoko ke, Athi uPilato kuye: hayi "Ngaba uthetha kum? Akwazi na ukuba ndinegunya lokukubethelela emnqamlezweni, yaye ndinegunya lokukukhulula?"
19:11 uYesu wamphendula, "Wena akuyi kuba negunya phezu kwam, ukuba ubungalinikwanga livela phezulu. Ngesi sizathu, lowo uye ondinikeleyo kuwe unesono esikhulu ngakumbi. "
19:12 Yaye ukususela ngoko, UPilato wayefuna ukumkhulula. Ke amaYuda bedanduluka, bathi: "Ukuba uyamkhulula lo mntu, wena akusihlobo sikaKesare. Kuba umntu ozenza ukumkani iyaphikisana uKesare. "
19:13 Ke kaloku uPilato, akuva la mazwi, wamzisa phandle uYesu ngaphandle, waza wahlala phantsi esihlalweni sokugweba, kwindawo ekuthiwa saMatye, kodwa in Hebrew, ibizwa ngokuba yi-Umphakamo.
19:14 Ke kaloku kwakuyimini yokulungiselela ipasika, malunga nelixa lesithandathu. Wathi ke kumaYuda, "Nanko ukumkani wenu."
19:15 Kodwa bedanduluka: "Msuse! Umsuse kude! Bethela!"Wathi ke uPilato kubo, "Ndiya kumbethelela inkosi yakho?"Ababingeleli eliphezulu basabela, "Thina asinaye ukumkani ngaphandle kuKesare."
19:16 ngoko ke, ke wamnikela ukuba abethelelwe emnqamlezweni. Bamthabatha ke uYesu, bemka naye.
19:17 Kwaye ethwele umnqamlezo wakhe, waphuma waya kwindawo le kuthiwa luKakayi, kodwa ngesiHebhere ibizwa ngokuba iNdawo yoKhakhayi.
19:18 Bambethelela emnqamlezweni khona apho, kunye nabanye ababini, omnye kwicala ngalinye, uYesu ke ephakathi.
19:19 Ke uPilato Kwakhona wabhala isihloko, waza wasibeka ngaphezu umnqamlezo. Kwaye ke kubhaliwe kwathiwa: UYesu waseNazarete, UKUMKANI WAMAYUDA.
19:20 ngoko ke, eninzi yamaYuda yawulesa, ngokuba indawo, uYesu awayebethelelwe kuyo emnqamlezweni, yayikufuphi nomzi. Kwaye ke kubhaliwe ngesiHebhere, in Greek, kanye in Latin.
19:21 Bahlanganisa ngoko ababingeleli abakhulu bamaYuda bathi kuPilato: Musa ukubhala, 'UKumkani wamaJuda,'Kodwa ukuba wathi, 'Mna uKumkani wamaYuda.'
19:22 uPilato waphendula, "Oko ndikubhalileyo, Endikubhalileyo ndikubhalile. "
19:23 Ke amajoni, xa abembethelele emnqamlezweni naye, wathabatha iingubo zakhe, kwaye benza izabelo ezine, enye inxalenye ukuze ijoni ngalinye, kunye isambatho. Kodwa ke ingubo yangaphantsi yabe ingenamthungo, silukiwe ukususela phezulu kulo lonke.
19:24 Baza bathi omnye komnye, "Masingabi uwugawule, kodwa kunokuba senze amaqashiso ngayo, ukuze babone oko kuya kuba. "Oku ukuze isibhalo sizaliseke, bathi: "Baye abelana ngezambatho zam phakathi kwabo, kwaye ngesambatho sam ukuba amaqashiso. "Yaye eneneni, azenza ezi zinto.
19:25 Kwaye emi ecaleni umnqamlezo kaYesu kwakumi unina, kunye nodade bonina, noMariya Cleophas, noMariya waseMagadala.
19:26 ngoko ke, xa UYesu akumbona unina, naye umfundi abemthanda emi kufuphi, wathi kunina, "Mfazi, nanko unyana wakho. "
19:27 Okulandelayo, Wathi kuloo mfundi, "Nanko unyoko." Yaye ukususela ngelo lixa, umfundi amukela wo nelakhe.
19:28 emva kwale, UYesu wayesazi ukuba zonke kuye kwafezwa, ngoko ukuze isibhalo izaliswe, uthe, "Ndinxaniwe."
19:29 Kwaye kwakukho isikhongozeli ibekwe khona, ngeviniga. ke, zibeke imfunxa ngeviniga ngeenxa ngehisope, Balizisa emlonyeni wakhe.
19:30 ke uYesu, xa wabeyamkele iviniga, wathi: "Kubhaliwe consummated." Kwaye equbuda intloko yakhe, wanikela umoya wakhe.
19:31 Ke amaJuda, kuba ibiyimini yokulungiselela, ukuze imizimba ingahlali emnqamlezweni ngesabatha (kuba loo sabatha ibingumhla omkhulu), bacela kuPilato ukwenzela ukuba imilenze yabo yaphulwe, kwaye basuswe.
19:32 ngoko ke, amajoni wasondela, yaye, kanjalo, ukuba ayaphula imilenze wokuqala, neyomnye obebethelelwe emnqamlezweni naye.
19:33 Kodwa emva kokuba beza kuYesu, xa akubona ukuba uselefile, akayaphula imilenze yakhe.
19:34 kunokuba, elinye ijoni wavula ecaleni incula, kwaoko kwaphuma igazi namanzi.
19:35 Nalowo ubonileyo oko uye wanikela ubungqina, nobungqina bakhe buyinyaniso. Naye yena uyazi ukuba uthetha inyaniso, ukuze nani nikholwe.
19:36 Kuba ezi zinto zenzeka ukuze isibhalo sizaliseke: "Uze kwaphula thambo ngaye."
19:37 kwaye kwakhona, esinye isibhalo sithi: "Baya kukhangela phezu kwakhe, bamhlabileyo amahlanza. "
19:38 ke, emveni kwezi zinto, UYosefu waseArimathiya, (ngokuba engumfundi kaYesu, kodwa umntu ofihlakeleyo ngenxa yokoyika amaYuda) ngokokude wacela kuPilato, ukuba awususe umzimba kaYesu. Ke uPilato wamnika imvume. ngoko ke, Waya ke, wazeka awususe umzimba kaYesu.
19:39 Ngoku uNikodemo ngafika, (wayekhe wadlana iindlebe noYesu ekuqaleni ebusuku) ezise umqulu yemore nekhala, nezinobunzima asixhenxe leeponti.
19:40 ngoko ke, Bawuthabatha ke umzimba kaYesu, baza bawubopha ngezisongelo zelinen kunye ubulawu, kanye njengoko kulisiko kumaYuda ukuba bangcwabe.
19:41 Ke kaloku, bekukho kuloo ndawo abebethelelwe kuyo emnqamlezweni umyezo, nasemyezweni apho bekukho ingcwaba elitsha, apho kungekho mntu ekungazanga kubekwe.
19:42 ngoko ke, ngenxa yemini yokulungiselela kwamaYuda, ngokuba ingcwaba belikufuphi, bahambisa uYesu.